Budata RealPlayer Cloud maka Windows
Budata RealPlayer Cloud
Free Budata maka Windows (1.02 MB)
Budata RealPlayer Cloud,
RealPlayer Cloud bụ ngwa nchekwa igwe ojii ahaziri maka ndị ọrụ na-echekwa vidiyo. Ị nwere ike ibugharị vidiyo gị gaa na gburugburu igwe ojii RealPlayer wee lelee ha na kọmputa Windows gị ma ọ bụ smartphones na mbadamba.
Na RealPlayer Cloud, nke nwere ike ịga nke ọma na-egwu video formats na-enweghị nịtụgharị na-akwado niile na-ewu ewu formats dị ka MKV, DIVX, XVID, MOV, AVI, MP4, FLV na WMV, ị nwere ike nyefee vidiyo gị netiti ngwaọrụ gị na-enweghị emeso HDMI ma ọ bụ USB cables. ma lelee vidiyo gị site na ngwaọrụ gị ọ bụla. Ihe niile ị ga - eme bụ iji otu netwọk WiFi. Nihi njirimara mmekọrịta akpaaka, vidiyo ị gbakwunyere na desktọpụ gị na-ebufe na ngwaọrụ gị ndị ọzọ notu oge. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịkọrọ ndị enyi gị vidiyo ma gbanwee ntọala nzuzo nke vidiyo gị dịka ọchịchọ gị siri dị. Ị nwere ike bulite vidiyo gị na igwe ojii, ị nwere ike ịnweta vidiyo gị na ngwaọrụ gị niile ọbụlagodi na ịnweghị njikọ ịntanetị.
Ị nwere ike ịmalite iji sọftụwia RealPlayer Cloud kwadoro site na ịmepụta akaụntụ efu gị. Ọ ga-ekwe omume ka ịmechaa usoro ndebanye aha ngwa ngwa site na ijikọ ya na akaụntụ Facebook gị. Mgbe obere oge gasịrị, interface dị mfe nke ngwanrọ na-anabata gị. Nkuzi vidiyo na-esi bulite vidiyo, bugharịa ha na ígwé ojii, jikọọ ngwaọrụ gị ibudata vidiyo, na nkenke, na-eji niile atụmatụ nke software na-agbakwunyere na software.
Na-enye 2GB nke nchekwa efu, RealPlayer Cloud bụ nnukwu, ngwa ngwa, dị mfe iji yana ngwanrọ ịkparịta ụka nefu nke ị nwere ike ibugharị, kesaa na bulite vidiyo gị nofe ngwaọrụ.
RealPlayer Cloud Ụdịdị
Nha faịlụ: 1.02 MB
Mmepụta: Real Networks, Inc.